Kunze Kwehuwandu hwevanhu: Mhando dzeVateereri Vepamberi Chikamu Chikamu Chinoita Kuti Zvibatanidzwe Zvinobatika | Martech Zone
Ndatenda chero guru raunotenda maari reKushambadzira Automation, uye nungo yacho inopa vashambadzi. Kazhinji kazhinji, isu tinoshandisa Kushambadzira Kushambadzira kwekubata uye kusimudzira zvinotungamira. Izvi zvinogona kuzadzikiswa nemadhora ekudonhedza, uye hunhu-hunokonzeresa ziviso yekuti vatore matanho. Mail Merge ndechimwe chinhu chakatumirwa kudenga. Mukana wekusanganisira wega, wega zita remugashiri mune chidzidzo uye mutsetse wekutanga weemail yako haina-kutadza kushandurwa-kuenderana ...
Ichokwadi hachisi chekushambadzira icho chete anogona enda zvakanyanya mberi; zvakare ndizvozvo zvinodiwa kuenda mberi zvakanyanya. Wakavadaidza nemazita avo ekutanga, asi iyo yese email yako humdrum, yakavepo-yakaitwa-iyo, uye haisi yemunhu zvachose. Zvechokwadi zvakasarudzika zvemukati zvinoda zvimwe. Kunyanya, zvinoda kujeka chikamu, kupfuura huwandu hwevanhu, kuziva vatengi, kunzwisisa zvavanoda, uye kutaura zvakananga kune zvavanoda.
Kushambadzira Chikamu Kunoenda Kunze Kwehuwandu hwevanhu
Chikamu chevateereri hachisi chinhu chitsva. Maiwe, hazvisi zvitsva zvekuti izvozvi iko kushoma kushoma; zvinotarisirwa kubva kuzvikwata zvekushambadzira mune chero indasitiri. Zvinosanganisira kupatsanura nekuisa muboka revashambadziri vateereri muzvikamu zvidiki, zvichibva pahunhu hwakasiyana hwavanazvo uye hunhu hwavanogovana. Unotoziva kuti chii, munhu wese aripo. Izvo zvinoshanda uye zviverengero zvinozvitaurira pachavo.
76% yevatengi vanotarisira kuti bhizinesi rizive zvavanofarira.
Huwandu hwevanhu ndiyo yepakutanga, yakajairika fomu yechikamu chevateereri. Sei vaisazove? Ivo vanopatsanura vanhu vakasiyana zvichibva pahunhu hwavo hwepakati senge zera, nzvimbo, uye bonde, kungodoma vashoma. Asi nhasi, izvi hazvisi izvo-zvese uye magumo-ese ese chikamu. Izvo hazvina kukwana kuita general uye kupatsanura zvichibva pane chimwe chinhu chisingakoshe sekukwavanobva kana kuti vakura zvakadii. Izvi hazviunzi kugadziriswa, ndeyekufungidzira fungidziro. Vatengi vako vanofanirwa zvirinani.
Bhizinesi rako rinofanirwa zvirinani. Kugadziridza kwakaringana kwekusvitsa nekutengesa zvemukati zvakakosha pakubudirira mune ramangwana.
Type 1: Chikamu chakavakirwa paPsychographics
Iko demographic data mapoinzi anotiudza isu ani iri kutenga chimwe chinhu, psychographic data poindi dzinotiudza sei vanhu ivavo varikutenga. Psychographic dhata inogona kushandiswa nechero bhizinesi kutora zvishuwo zvinotyaira vateereri 'maitiro ekutenga. Makambani anoita mhando iyi yekutsvaga kazhinji anotarisa kune vatengi hunhu, mararamiro, chimiro chekirasi, maonero, zvitendero, uye zviitiko zvezuva nezuva.
25 kuna 30
Imari ~ $ 25,000
Ane Hanya Nechitarisiko
Keen Mutyairi uye Mutambi
Yakawanda yeSpare Nguva
Mudiki Nyanzvi; Basa-Rinotungamirwa
Psychographic inobvumidza vashambadziri kukwidziridza ivo pachavo vekusvikira kwavo neanoverengeka mamaki. Inobatsira, yakachena data yakakamurwa zvakaenzana inoita kuti vakwanise kutaura mumutauro wevatengi vavo padanho remanzwiro, kunyatsonzwisisa mashandiro anoita chigadzirwa uye mashandisiro avo, uye kutarisa pazvinhu zvinovafadza kwazvo. Inovapa zano riri nani rekuti chigadzirwa chinokwana kupi muhupenyu hwavo, ichivapa simba rekukoshesesa mameseji kune izvi.
Sei? Psychographic segmentation inoda kuongororwa kwehunhu hwakasiyana hwevateereri usati wavaparadzanisa. Inoshandisa tsvagiridzo yemhando yepamusoro inoitwa kuburikidza nezvipo zvekuzvidira senge ongororo, kubvunzurudza, uye mibvunzo kuti uburitse zvimwe, zvakanangana nedhata pamusoro peumwe neumwe anotora chikamu. Mibvunzo yacho inogona kuvhara chero huwandu hwenyaya dzinoenderana nemaindasitiri Semuenzaniso, makambani eB2B anowanzo tarisa pane mabasa-anofanira kuitwa uye mibvunzo yevatengi yekuvandudza. Iyi mitsara yemubvunzo inobatsira kutsanangura maitiro ekukwikwidza chigadzirwa muZvakanakisa Kasitoma Mbiri (ICP) basa rezuva nezuva, uye kuti chigadzirwa chavo chinogona sei kukurumidza mhedzisiro
Rangarira. Pane mutsetse wakanaka pakati pekushandurwa chaiko uye nekutyorwa chaiko kwekuvanzika. Zviripachena, iwe unongofanirwa kungotora data remushandisi nemvumo yavo, asi iwe unofanirwa zvakare kuve nechokwadi icho chauri kukumbira kwavari hachisi chako pachako uye chinokanganisa. Neichi chikonzero, zvinogona kuve zvinonetsa kuwana psychographic dhata. Pfungwa yakanaka ndeyekupa inofarira-yakatarwa, inobatsira, yemahara zvemukati mukudzosera kubatana kwavo, kana iko kwekutanga-kuwana-kwechigadzirwa kana basa richangobva kugadzirwa.
Tora 2: Segmentation Yakavakirwa Pane Kukosha Kune Mutengi
Inofarira-based segmentation inotarisa chaizvo kune mhando yezvinyorwa zvinotarisira, zvinotungamira, uye zviripo vatengi zvinodya. Icho chidimbu chakanyatsogadzirirwa kusundira avo vashandisi kuwedzera pasi pefanera, nekupa chero chinhu asi kukosha uye hunyanzvi sezvavanotsvaga chigadzirwa chavo. Semuenzaniso, kana imwe yetarisiro yedu ikasaina kune yedu yekutumira tsamba nekuti ivo vakadhiza yedu inotonhora-kutumira tsamba eBook, saka tinogona kuzviisa muboka revanhu vanofarira kutonhora email.
Kungoti tarisiro yekuverenga zvemukati hazvireve kuti vachatenga chigadzirwa chako.
Chirevo chiri pamusoro ndechechokwadi. Asi iyo nzira yese yekutengesa-kwakavakirwa pakutengesa kunoenderana nekunzwisisa nekusimbisa zvikonzero nei chigadzirwa changu chakakosha kune tarisiro. Kana ini ndikacherekedza kuti vari kurodha pasi yangu inotonhora maemail maidi, saka ivo vangangove vanofarira mune mamwe anotonhora emailing zvemukati senge yangu ezvinyorwa mutsara blog zvinyorwa; yangu 'maitiro ekutsvaga chero email kero' kufamba.
Pakupedzisira, vatengesi vanogona kukwirisa kusvika uku uye kusundira tarisiro kuwedzera pasi pefaneri nekuvapa demo rinotungamirwa-rekutengesa rwechigadzirwa chavo. Mubairo wavo ndeyekuona, kutapurika kubva pane zvavakaisa. Kuenda kumberi, ivo vanokwanisa kutumira akawanda maemail pachiyero, vasati vaongorora mashandiro avo uye nekuvandudza mashandiro avo kune ari nani mhinduro mareti.
Tora 3: Segmentation Yakavakirwa Pane Kukosha Kune Bhizinesi
Kukosha-kwakavakirwa chikamu chidimbu chega chikamu chinoisa tarisiro, zvinotungamira, uye vatengi mumapoka zvichienderana nekukosha kwavanogona kupa kune bhizinesi. Kazhinji ini handifunge iyi seyakanyanya maitiro-kutyaira sekisheni maitiro. Asi, mushure mezvakaitwa nedenda kune bhizinesi renyika, zvava kuda kuva mutsauko pakati pechikamu chinoshanda uye chisingashande kuenda kumberi.
Simba rekutenga rakangova so zvisingatarisirwi. Nzira iyo denda uye rakatevera kukiyiwa zvakakanganisa mabhizinesi akasiyana mumaindasitiri akasiyana akasiyana zvachose. Semuenzaniso, mazhinji eCommerce nzvimbo dzakabudirira, asi makambani ekufambisa akaunzwa kumabvi. Kutengesa mabhizinesi vanofanirwa kuziva izvi uye kukwira pamusoro pazvo, vachigovanisa vatengi vavo zvichibva nemaitiro avo. Ipapo, ivo vanokwanisa kupa zvakasarudzika, zvinonzwira tsitsi zvemukati uye zvinopa kubatsira vatengi vavo.
Sei? Mabhizinesi anofanirwa kushandisa yekukurukura vatengi ruzivo. Usagare pasi womirira chikumbiro chekudzima. svika kune vatengi vako nemibvunzo yekutengeserana kana mapaki ekutengesa ayo angave ane chekuita navo. Ratidza kuva nehanya, kunzwira tsitsi, kuyanana, uye nechido chechokwadi chekuvabatsira munguva yavo yekuda. Gara nhanho imwe kumberi, uye hauzodzokera kumashure.
Isa makambani mumabhureki zvichibva nemabatiro avakaita. Kana ivo vakatambura, vanogona kuve vanowanzo tenderera kutora mukana wekudzikisira zvinopihwa. Kana ivo vari kubudirira, vanogona kunge vakagadzirira kusimudzira kwezvakafanana zvigadzirwa.
Tora 4: Segmentation Yakavakirwa paKubatanidzwa
Chidzidzo chekupedzisira mune yedu Chikamu chePamberi kirasi ndeye kuve nechikamu chevateereri zvinoenderana nemabatiro ainoita nechiratidzo. Iyo subset ye psychographic segmentation, uye inofunga nezve tarisiro, zvinotungamira, uye vatengi varipo vanoita nemuchina pane akasiyana mapuratifomu. Iyo midhiya enhau, yakavhurika mitengo, zvinotsvaga-kuburikidza, uye ndeapi mamwe madhijitari avanoshandisa kushandisa kwavo zvemukati.
Zvinhu zvitatu zvakakura zvinotyaira kubatanidzwa:
Kukosha, Kakawanda, Kudana-ku-Chiito.
Kana iwe uchitoziva kuti yako tarisiro haisi kuvhura maemail ako, hapana chikonzero chekuparadza nguva nekuvatumira mamwe manomwe maemail ekutevera. Zvichienderana, iwe unogona kuona kuti tarisiro inogara ichivhura maemail ako asi isingapindure. Zvinogona kunge zvakafanira kuzviisa muboka repamusoro revabatsiri vanovhura kuteedzera kana vangangoda imwe tambo yekusvikira.
Kufananidza ndewe A / B kuyedza kwemisara yenyaya kuti uwane iyo chaiyo inovhura yakavhurika. Izvo zvakagadzirirwa-zvakagadzirwa zvinopihwa kunonyorwa mune iwo maratidziro emisoro kuti vawedzere kubatanidzwa kwavo uye mikana yekutendeuka. Iri kutumira kufambiswa kweemail panguva yakakwana yekuti vavhure. Iri kuitumira iyo chaiyo nguva yenguva, kuti urege kukurira kana kumanikidza wako anogamuchira.
Sei? Zvikamu zvekubatirana zvinogona kuitwa zvichibva paemail yekuteedzera mhedzisiro kuteedzera kwese kusangana. Kazhinji, izvi zvinosanganisira kushandisa software inoisa mapikisheni madiki ekutevera mumaemail. Kana aya mapikisheni ekuvhura akavhurwa, inotumira yekukumbira chikumbiro kumaseva evateereri ekuteedzera. Izvi zvinoverengerwa se maonero. Kubva ipapo, vashandisi vanogona kuona kuti ndiani, riini, uye ndechipi chigadzirwa chemukati chavo chakavhurwa.
Rangarira. Ndiri kungotaura zvakajeka kuemail mune ino muenzaniso nekuti ndosaka niche yangu ichinyepa. Email ndiyo yechinyakare fomu yekushambadzira kusvika, chokwadi. Sezvatinopinda mugore idzva, tinoona mapuratifomu achiwedzera achiuya pachikuva, senge nhaurirano dzepamoyo, vezvenhau, uye mapuratifomu emunharaunda. Isu tinofanirwa kuteedzera kudyidzana uku uye nekuchengetedza ruzivo rwakasarudzika pane yega yega nzira dzakasiyana.
Chikamu chevateereri chinoenda kupfuura huwandu hwevanhu. Inotarisa zvinokurudzirwa nemutengi nemamiriro ezvinhu. Inotarisa mune zvavanoda saka unogona kuvapa zvavanoda. Ndiyo kiyi yekukura nhasi.
Tags: mabasavateereri kubatanidzwachikamu chevateererizvitenderozvinokurudzira mutengichikamu chemutengichinzvimbo chekirasimutengi kukosha chidimbudemographicsemail kushambadzira chikamumararamiromarketing automationkushambadzira otomatiki chidimbukushambadzira chikamunepfungwaPersonalizationpsychographicchimiro chepfungwachikamu chepfungwasalesforcezvikamutsika